ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်အာဆီယံနှင့်ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများအကြား သီးခြားစီ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ အစည်းအဝေးများနှင့် (၂၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံအပေါင်းသုံး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်
Ministry of Information/ Naypyitaw / August 03, 2021
နေပြည်တော် ဩဂုတ် ၃ နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်သည် ယနေ့နံနက် ၈ နာရီတွင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့် ဖြင့် ကျင်းပသည့် အာဆီယံ-တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ အာဆီယံ-တရုတ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများအစည်း အဝေး၊ အာဆီယံ- ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးနှင့် (၂၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ အပေါင်းသုံး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးတို့ကို နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊ နေပြည်တော်မှ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အာဆီယံနှင့်ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများအကြား သီးခြားစီကျင်းပသည့် အစည်းအဝေး များသို့ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးများတွင် အာဆီယံနှင့် သက်ဆိုင် ရာဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံအသီးသီးမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက အာဆီယံနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများအကြား အနာဂတ်တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုတိုးမြှင့်နိုင်မည့် အလားအလာများနှင့် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာကိစ္စရပ်များကို အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အာဆီယံ-ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီး (၂) Dato Erywan Pehin Yusof နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Mr. Chung Eui-yong တို့က ပူးတွဲသဘာပတိများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က အာဆီယံနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဦးစားပေး နယ်ပယ်သုံးရပ်ဖြစ်သည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး သာတူညီမျှရရှိရေး၊ ဒေသတွင်း ဘက်စုံ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် (RCEP) နှင့် အာဆီယံ-ကိုရီးယား လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များကို အခြေခံလျက် နှစ်ဖက်အပြန်အလှန် အကျိုးဖြစ်ထွန်းရေး၊ ရေရှည်တည်တံ့သည့် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖော်ဆောင်ရေး တို့မှတစ်ဆင့် စီးပွားရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားရန် အလေးပေး ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူစာချုပ် (RCEP) အတည်ပြုခဲ့သည့် နိုင်ငံများကို ကြိုဆိုခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း RCEP သဘောတူညီချက် စာပိုဒ် ၂၀.၅ နှင့် ၂၀.၆ နှင့်အညီ အတည်ပြု ပါဝင်ထားကြောင်း အစည်းအဝေးသို့ အသိပေးခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ အာဆီယံ-တရုတ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကို တဆက် စပ်တည်း ကျင်းပခဲ့ရာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Teodoro Locsin Jr နှင့် တရုတ် နိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Wang Yi တို့က ပူးတွဲသဘာပတိ များအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးက အာဆီယံနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတို့အကြား အိမ်နီးချင်းကောင်း ဆက်ဆံ ရေး၊ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု၊ ထောက်ပံ့မှုနှင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမှုတို့ဖြင့် အာဆီယံ- တရုတ် ဆွေးနွေး ဖက်ဆက်ဆံရေး၏ နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကျော်ခရီးတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက် လျက်ရှိခြင်းကို ကျေနပ်အားရမှုရှိကြောင်း၊ အာဆီယံ-တရုတ် ဆွေးနွေးဖက် ဆက်ဆံရေး နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ကြိုလင့်လျက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် ဆွေးနွေးဖက် ဆက်ဆံရေး၏ ဦးတည်ချက်ဆောင်ပုဒ်အဖြစ် "စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု" (Sustainable Development Cooperation) ကို ဆက်လက် ဖော်ဆောင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အဆိုပြုချက်ကိုလည်း ကြိုဆိုကြောင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ အာဆီယံ တုန့်ပြန်ရေး ရန်ပုံငွေနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး အရေးပေါ် အခြေအနေဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ အတွက် အာဆီယံ-တရုတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ရန်ပုံငွေတို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ထောက်ပံ့ မှုများကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံမှ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးများနှင့် ဆက်စပ် ဆေးပစ္စည်းအထောက်အပံ့များ လှူဒါန်းခြင်း အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေး ပြောကြားသည်။ အစည်းအဝေးအပြီးတွင်၊ အာဆီယံ-တရုတ် ဆွေးနွေးဖက် ဆက်ဆံရေး၏ ညှိနှိုင်းရေး နိုင်ငံအဖြစ် အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးကို ချီးကျုးဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီး အာဆီယံ-တရုတ် ဆွေးနွေးဖက် ဆက်ဆံရေး၏ ညှိနှိုင်းရေး နိုင်ငံ အသစ်အဖြစ် တာဝန်ယူမည့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အရှိန်အဟုန်ကောင်းလျက်ရှိသည့် ဆွေးနွေးဖက် ဆက်ဆံရေးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလျက် နှစ်ဖက်ပြည်သူများ၏ အပြန် အလှန် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ပေးမည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဖော်ဆောင်ရန် အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့နှင့်အတူ နီးကပ်စွာ လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ကတိပြုပြောကြားခဲ့သည်။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အာဆီယံ-ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကို ကျင်းပ ခဲ့ပြီး ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Bui Thanh Son နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး H.E. Toshimitsu Motegi တို့က ပူးတွဲသဘာပတိ များအဖြစ် ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေး၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အာဆီယံ နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ တို့အနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ တုံ့ပြန်ရေးကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် ရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီ ပေးရေး ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို မြှင့်တင်ရေးနှင့် အာဆီယံပေါင်းစည်း‌ရေး ဦးဆောင် ဦးရွက်ပြုမှု အစီအစဉ် - ၄ (Initiative for ASEAN Integration- IAI Work Plan IV) ဖော်ဆောင်ရာတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဆက်လက်ထောက်ပံ့မှုများကို ကြိုဆိုပါကြောင်း ဆွေးနွေး ပြောကြားသည်။ (၂၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံအပေါင်းသုံး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးကို ဘရူနိုင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး(၂) Dato Erywan Pehin Yusof က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၊ အပေါင်းသုံးနိုင်ငံ (တရုတ်၊ ဂျပန်နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ)တို့မှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများနှင့် အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေး၌ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး များသည် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံ တကာကိစ္စရပ်များ၊ အာဆီယံ အပေါင်းသုံးမူဘောင် အောက်ရှိ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကဏ္ဍများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြပြီး ရှေ့လုပ်ငန်းများအပေါ် အမြင် ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု ကို ထိထိရောက်ရောက် တိုက်ဖျက်ရေး၊ ကာကွယ်ဆေး သာတူညီမျှရရှိရေး၊ ကုန်ထုတ် စွမ်းအင် ဆုံးရှုံးမှု သက်သာစေရန် ဒီဂျစ်တယ် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးနှင့် ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ ကုန်စည်စီးဆင်းမှု စီမံခန့်ခွဲမှုများကို မြှင့်တင်ရေးတို့သည် အရေးကြီးကြောင်း အလေးပေးပြောကြားသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးများသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ အရာရှိကြီးများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ (သတင်းစဉ်)